Soo dejisan Baidu Browser 43.23.1000.500 – Vessoft
WindowsInternetkaDareemaha WebkaBaidu Browser
Bogga rasmiga ah: Baidu Browser
Baidu Browser – shabakada internetka oo dhamaystiran oo ka soo jeeda kobcin Chinese. Software wuxuu leeyahay shaqeyn sahlan aasaasiga ah wuxuuna adeegsadaa makiinada yar ee shaqada. Waxaa ka mid ah sifooyinka Baidu Browser waxaa ku jira faylasha faylasha lagu dhejiyo, qalab lagu ogaanayo iyo hagaajinta dhibaatooyinka shaqada ee shabakadda, qabashada sawirada shaashadda, isdhexgalka shabakadaha bulshada, iwm. user ka soo horjeeda faylasha shaki iyo furitaanka bogagga khatarta ah. Sidoo kale Baidu Browser waxaa ku jira module-ka-dhajinta si loo soo dejiyo faylasha torrent-ka iyada oo aan la isticmaalin barnaamijka saddexaad.
Soo-dejiyaha warfaafinta ee la dhisay
Macmiilka torrent-ka ee dhisay
Aqoonsiga iyo hagaajinta dhibaatooyinka inta lagu jiro surfing webka
Isku xirnaanta kordhinta
Soo dejisan Baidu Browser
Faallo ku saabsan Baidu Browser
Baidu Browser Xirfadaha la xiriira